ကမ္ဘောဇသာဒီ နန်းတော်တွင် ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီး၏ မိဖုရား ထိုင်းမင်းသမီး ဆုပန်ကလျာ ရုပ်တု?? - Yangon Media Group
ပဲခူးကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်ကြီးတွင် ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး၊ မြန်မာမိဖုရားခေါင်ကြီးတို့နှင့်အတူ မိဖုရားထိုင်းမင်းသမီး ဆုပန်ကလျာရုပ်တုကို ပြန်လည်ထားရှိနိုင်ပါက ထိုင်းခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ဂါဝရပြုကြမည်ဖြစ်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာနိုင်ကြောင်း သာသနာ ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်က အမျိုးသားပြတိုက် ရန်ကုန်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ‘မြန်မာဓလေ့ဖြစ် ထွန်းမှုများ(၁၉၄၈ -၁၉၆၂)စာတမ်းဖတ်ပွဲ’အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ထည့်သွင်းပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ”သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကို ထိုင်းမိတ်ဆွေတချို့ ကလာတွေ့တာရှိပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးကလည်း လာတွေ့တာရှိပါတယ်။ ပဲခူးမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘောဇသာဒီနန်းတော်ကြီးမှာ မိဖုရား ခေါင်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယမိဖုရား မိဖုရားဆုပန်ကလျာ အရင်ကရှိခဲ့ပါတယ်။ အခုဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်တဲ့။ သူတို့ဆန္ဒကတော့ သင့် လျော်ရာနေရာမှာ ပြန်ထားပေး စေလိုပါတယ်တဲ့။ ရှည်လျားခန့်ညားလှတဲ့ ကျွန်တော်တို့သမိုင်း ကြောင်းကိုကျတော့ သူတို့မသိ တော့ပါဘူး။ ဘုရင့်နောင်ရဲ့ ချီးမြှင့် မှုတွေကို မသိတော့ပါဘူး။ ဒါ ကြောင့် ဘုရင့်နောင်မင်းတရား ကြီး၊ မိဖုရားခေါင်ကြီးနှင့်အတူ မိဖုရား ဆုပန်ကလျာကိုထားမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း ဝမ်းသာအားရထားချင်ပါတယ်။ လွှတ် တော်သီဟသနပလ္လင်ထက်မှာမထားရင်တောင်မှ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာ၊ ဥယျာဉ်စတဲ့သင့်လျော်တဲ့ နေရာမှာထားပေးပါမယ်။ ဘုရင့် နောင်နဲ့မိဖုရားကြီးကို လာဂါဝရ ပြုမယ့် ထိုင်းခရီးသွား ဆယ်ဆမကတိုးလာမယ်လို့ပြောပါတယ်။ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာလည်း တိုးတက်လာပါမယ်”ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရအောင်ကို ကပြောသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြောင်းကို အသက် ၅ဝ နှစ်အောက် ထိုင်းနိုင်ငံသားမျိုးဆက်သစ်များက ကောင်း ကောင်းမသိရှိကြဘဲ ပညာရှင်များ၊ ပညာတတ်များ၊ကမ္ဘာ့အဆင့် ဥာဏ်ပညာရှိသူများရှိနေသည်ကို လက်မခံနိုင်သည့်အခြေအနေများမှ အမြင်များပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုသည်။ ဘုရင့်နောင် မင်းတရားကြီးသည် ယိုးဒယား(ထိုင်းနိုင်ငံ)ကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် ယိုးဒယားလူမျိုး (ထိုင်းလူမျိုး) ဗြမဟာဓမ္မရာဇာမင်းကို ဘုရင်အဖြစ် တင်မြှောက်ပေး တော်မူခဲ့သလို ဘုရင်၏ဆက်သမှု ကြောင့် ယိုးဒယားဘုရင်၏နှမတော် အသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်ရွှေအဆင်းကဲ့သို့ အသားအရေချောမွေ့သူ (ဗြသုဝဏ္ဏဒေဝီ)ဆုပန်ကလျာကို မိ ဖုရားအဖြစ် ချီးမြှင့်မြှောက်စားခဲ့ကြောင်း၊ သမီးတော်တစ်ပါးမွေး ဖွားခဲ့ကြောင်း သမိုင်းရာဇဝင်များအရ သိရသည်။
မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော်ကြီး၏ ဥတုဇရုပ်ကလာပ်တော်ကို ဆရာတော်၏ တပည့်ဒါယကာ ဒါယိကာမများ ပူဇော်ကြည??